DEG DEG+DHAGAYSO:Maraykanka oo warkii ugu cuslaa kasoo saaray xaalada magaalada JigJiga & Qalalaasaha ka taagan Itoobiya oo…. – Puntlandtimes
DEG DEG+DHAGAYSO:Maraykanka oo warkii ugu cuslaa kasoo saaray xaalada magaalada JigJiga & Qalalaasaha ka taagan Itoobiya oo….
August 5, 2018 Wariye
NAIROBI(P-TIMES)-War qoraal ah oo kasoo baxay safaaradda Maraykanka ee magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Itoobiya ayaa lagu sheegay in dhulka Soomaalida ee Itoobiya uu ka jiro qalalaase aad u xoogan oo saamayn balaadhan leh.
Safaaradda ayaa sheegtay in ay isha ku hayso hadba sida uu wax isu badalayaan iyo qalalaasaha ka socda dhulka Soomaalida Itoobiya kaas oo bilowday maalinimadii shalay oo Sabti ahayd. RIIX HALKAN OO KA DHAGAYSO DIGNIINTA
Safaaradda ayaa dadka Maraykanka ah ee jooga deegaanada ismaamulka Soomaalida Itoobiya ugu baaqday in ay aad u taxadaraan isla markaasna ay ka fogaadaan goobaha ay dhibaatooyinku ka jiraan, waxaana safaaraddu dadka dhalashada Maraykanka haysta kula talisay in ay guryahooda joogaan.
Sidoo kale safaaradda ayaa dadka Maraykanka ah u sheegtay in ay safaaradda soo wargaliyaan hadii ay wax khatar ah dareemaan si loo bad baadiyo nafahooda iyo maalkoodaba.
RIIX HALKAN OO KA DHAGAYSO DIGNIINTA
Dowladda Maraykanka ayaa dhowr jeer oo hore digniino kasoo saartay deegaanada Soomaalida Itoobiya iyo xaaladaha qalafsan ee guud ahaanba ka taagan dalka Itoobiya.
Sidoo kale waxaa arintan isha ku haya safaaradaha aduunka ee ku yaala magaalada Addis Ababa waxaana la eegayaa sida ay wax isku badalaan.
Hassan nur hassan says:
Waxaan leeyahay dalka ethiopia allah ayaa nabad kumanaystay hadana waxaana leeyahay allow nabad soo daji